Industry Archive - Weihai Greatsup Co. , Ltd
ဒီနေ့, ပြင်ပအားကစားများအရှိန်အဟုန်မြင့်မားလျက်ရှိသည်, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကိစ္စများကိုအစီအစဉ်တွင်ဖော်ပြရန်လိုသည်, များစွာသောခန့်မှန်းရခက်အရေးပေါ်အခြေအနေရှိပါတယ်, လေပြင်း, မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်း, ဆီးနှင်းထူထူ, အလွန်အမင်းအပူ, ပြင်းထန်အအေးမိ, ဒဏ်ရာများ ... အပြင်အဖြစ်အပျက်များနှင့်မတော်တဆမှုများစွာတို့သည်လူအားအပြင်ပန်းအားကစားသည်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းသတိပေးခြင်းဖြစ်သည်, and you should be cautious in participating.…
ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆဲကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းထားသည့်လူကြီးများထက်လှော်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းငယ် ပို၍ စဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်, teenagers can choose inflatable paddle board according to the following methods： 1.အရှည်: Paddle ရဲ့အရှည်က Paddle ရဲ့အမြင့်နဲ့နီးကပ်ပါတယ်, ဆယ်ကျော်သက်နေဆဲကြီးထွားလာကြသည်အဖြစ်, the length of the paddle naturally…
တနင်္ဂနွေနေ့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? ၎င်းသည်လူကြီးများနှင့်ကလေးများနှစ်သက်သောအားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်. ယခုအချိန်သည်ပန်းများနှင့် SUP ကိုခံစားရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်. မကြာသေးမီက, မြစ်ကိုပိုပြီးခရီးတွေရှိတယ်. Some people will feel that kapok tree is the symbol of the time when every ferry depends on waterway transportation.Let's take the board and have fun.…
မူပိုင်ခွင့်© 2021 သင့်ကုမ္ပဏီ Weihai Greatsup Co. , Ltd